Qabsoon Oromoon geggeesse Woyyaaneen Somaaliyaa gadilakkistee akka baatuuf dhirqamsiise - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Qabsoon Oromoon geggeesse Woyyaaneen Somaaliyaa gadilakkistee akka baatuuf dhirqamsiise
Qabsoon Oromoon geggeesse Woyyaaneen Somaaliyaa gadilakkistee akka baatuuf dhirqamsiise
Woraanni biyyattii Somaaliyatti naga eegsisuu mitii rakkoo Oromoo fi Amaara biraa Woyyaanee qunnamee tasgabbeesuu hin dandeenne
Woraanni Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf Somaaliyaa keessa quphatee ture biyyattii gadi lakkisaa bayaa jiraachuun beekame. Akka gabaasa AFP’tti sochiin Somaaliyaa gadi lakkisanii bayuu kuni kan eegalame torbee muraasa dura. Ammas akkuam itti fufetti jira.
Maaltu woraanni Itoophiyaa Somalaiyaa gadi lakkisee akka bayuuf isa dirqe? Gama mootummaa Itoophiyaatiin ibsi laatame hin jiru. Garuu, humni woraanaa Woyyaaneen qabduu fi abdattu sa’aa kanatti Somaaliyaa fi biyyoota Afrikaa biraa keessatti naga eegsisuu mitii rakkoo cimaa biyya keessatti Oromoo fi Amaara biraa isii qunname tasgabbeesuu hin dandeenne. Hunda caalatti mormiin ummataa mootummaa hedduu sochoosaa fi sodaachisaa waan dhufeef kana booda kallattiin xiyyeeffannaa Woyyaanee Somaaliyatti naga eegsisuu osoo hin taane woraana qabdu hundaan uf marsuu fi lubbuu ufii hanga daqiiqaa dhumaatti tiksuu ta’uu mul’isa.
Magaalota woraanni Itoophiyaa gadi lakkisee baye hundi battalumatti harka garee Al-shabaabitti kufaa jiraachuun hubatameera.
waraanni itoophiyaa somaaliyaa gadilakkisuu
Previous articleLabsiin yeroo hatattamaa waan hanga ammaatti hin daangofne maal daangessa; Gidiraa Oromoon hin argine kam gadi baasa?
Next articleAddunyaan Woyyaaneetti dudda kennuu eegalte